TH - ไทยEN - EnglishID - BahasaKH - CambodiaVN - Vietnam
ကင်ဆာရောဂါသည် အသေအပျောက်နှုန်းမြင့်မားနိုင်သည့် ရှုပ်ထွေးသောရောဂါတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကင်ဆာရောဂါအကျိုးဆက်သည် နောက်ပိုင်းအဆင့်ရောက်ရှိပါက ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် စောစီးစွာရောဂါတွေ့ရှိ၍ ကုသမှုခံယူူခြင်းသည် ပိုကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးရလာဒ်နှင့် ဆက်နွှယ်နေသည်။
*ဤပက်ကေ့တွင် အခြားသော “ကင်ဆာရောဂါအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစစ်ဆေးခြင်း (အမျိုးသား) သို့မဟုတ် (အမျိုးသမီး)” ကိုသာ အခမဲ့ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
*ဝယ်ယူရာတွင် ပက်ကေ့အများအပြားရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရိုမိုးရှင်း စဉ်းစားရာတွင် သင့်အတွက် အလိုအလျောက် ဈေးနှုန်း တွက်ချက်မည်။
*အချို့သော Esperance ပက်ကေ့များသည် ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
သင်သည် ဆေးစစ်ချက်အဖြေအသေးစိတ်ကို ခန့်မှန်းခြေ ၅ ရက်အတွင်း ရရှိမည်။
အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါက အကြံပြုချက်တွင် အနေအထိုင်ပြောင်းလဲခြင်း (အစားအသောက်လျှော့ခြင်းနှင့် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း)၊ နောက်ဆက်တွဲ သို့မဟုတ် အခြားရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်မှု ပါဝင်နိုင်သည်။
နောက်ဆက်တွဲဆရာဝန်ချိန်းဆိုချက်ကို ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရမှု(များ)လျှော့ချနိုင်စေရန် အချိန်ဇယား သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ကင်ဆာရောဂါကို အဘယ်ကြောင့် အပြည့်အစုံစစ်ဆေးသင့်သလဲ?
ကင်ဆာရောဂါသည် အသေအပျောက်နှုန်းမြင့်မားနိုင်သည့် ရှုပ်ထွေးသောရောဂါတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကင်ဆာရောဂါအကျိုးဆက်သည် နောက်ပိုင်းအဆင့်ရောက်ရှိပါက ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် စောစီးစွာရောဂါတွေ့ရှိ၍ ကုသမှုခံယူူခြင်းသည် ပိုကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးရလာဒ်နှင့် ဆက်နွှယ်နေသည်။ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားရခြင်းသည် အဓိကအားဖြင့် မျိုးရိုးလိုက်သည်ဟု ထင်ခဲ့ကြပြီး အကြောင်းရင်းများစွာအပေါ် မူတည်သည်။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်၏ တွေ့ရှိချက်အရ မျိုးရိုးလိုက်သည့်မျိုးရိုးဗီဇသည် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားရခြင်း၏ ၅-၁၀% သာရှိသည်။ နေထိုင်မှုအပြုအမူ မကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းရင်းများသည် လူအများအတွက် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားရသည့်အန္တရာယ်အလတ်စားမှ အန္တရာယ်မြင့်မားကြောင်း ဤအထောက်အထားမှ သက်သေပြသည်။ Esperance အထူးကင်ဆာရောဂါဌာနသည် ကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ရေးအခြေခံအဖြစ် ကင်ဆာရောဂါစစ်ဆေးမှုပက်ကေ့များ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
Esperance အထူးကင်ဆာရောဂါဌာနတွင် အဖွဲ့မှ မည်သည့်အချက်များ ရယူသနည်း?
သင်၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ် : ကင်ဆာဆဲလ်များကို အမြဲတမ်းထုတ်ပေးသည်။ သို့သော်လည်း ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်သည် ကင်ဆာဆဲလ်များအား ရှာဖွေ၍ ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ် အားနဲပါက ကင်ဆာဆဲလ်များသည် ကြီးထွား၍ ပိုမိုသန်မာရန် အခွင့်ကောင်း ရယူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို အကဲဖြတ်ပြီး အားနဲပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အကြံပြုချက်များ ပေးနိုင်သည်။
ရောင်ရမ်းမှုအချက်ပြမှုများ : နာတာရှည်ရောင်ရမ်းမှုသည် ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှု သို့မဟုတ် ကင်ဆာကြီးထွားမှုကို ဖော်ပြနိုင်သည်။ ရောင်ရမ်းမှုအချက်ပြမှုများကို အသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကြီးထွားလာနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိမရှိ စောစီးစွာကုသမှုအကြံပြုချက်ပေးနိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ကင်ဆာညွှန်ပြမှုအဆင့်များ : အကဲဖြတ်ချက်သည် ကိုယ်ခန္ဓာတွင် ကင်ဆာဆဲလ်များရှိနေမှုကို ညွှန်ပြနိုင်သည်။ အချို့သောညွှန်ပြချက်များသည် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသမီးခန္ဓာဗေဒအတွက် တိကျသည်။ အခြားအရာများသည် အမျိုးသားနှင့် သမျိုးသမီးအတွက် သက်ဆိုင်သည်။
အကြီးစားသတ္ထု : အကြီးစားသတ္ထုများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှိသောကြောင့် အကြီးစားသတ္ထုနှင့်ထိတွေ့မှုသည် ဆက်လက်တည်ရှိဆဲ ဖြစ်သည်။ အဆိပ်အတောက်ရှိအကြီးစားသတ္ထုများသည် ဓာတ်ပြုအောက်ဆီဂျင်မျိုးရိုး (ROS) ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ အကြီးစားသတ္ထုအဆင့် အကဲဖြတ်ပါက ဆရာဝန်သည် သွေးကြောရှိအဆိပ်အတောက်အချက်အလက်များ ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာမှ အကြီးစားသတ္ထုများ ဖယ်ရှားရန် နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ပက်ကေ့တွင် ဆရာဝန်စမ်းသပ်ခ၊ သွေးစစ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံစာများ ပါဝင်သည်။
ပက်ကေ့တွင် ဆေးစစ်ချက်အဖြေအပေါ် မူတည်၍ ဆရာဝန်မှ အကြံပြုသည့် နောက်ထပ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ကုသခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ မပါဝင်ပါ။
ပက်ကေ့တွင် ဤပက်ကေ့၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သော ဆေးရုံကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဆေးကုသရေးပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်များ မပါဝင်ပါ။
ပရိုမိုးရှင်းပက်ကေ့ဈေးနှုန်းများသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်အထိသာ ဖြစ်သည်။
၀န်ဆောင်မှုကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဤပက်ကေ့အား ကော်ပိုရိတ်မိတ်ဖက်၊ အသက်အာမခံတိုက်ရိုက်ငွေတောင်းခံမှုသဘောတူညီချက်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ၊ အခြားသော ကမ်းလှမ်းချက်များ၊ လျှော့ဈေး၊ ကော်ပိုရိတ်မိတ်ဖက်လျှော့ဈေး သို့မဟုတ် အခြားသော ပရိုမိုးရှင်းများနှင့် တွဲဖက်မယူနိုင်ပါ။
ဤကမ်းလှမ်းချက်သည် ပက်ကေ့ဈေးနှုန်း ဖြစ်သည်။ သင်သည် အချို့သောကုသမှုများ မရယူနိုင်ပါက Esperance မှ ငွေပြန်အမ်းမှု မပေးဘဲ ထားနိုင်သည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုကို Esperance အထူးကင်ဆာရောဂါဌာန၊ ၁၁ ထပ်၊ ဘမ်ရုမ်ရပ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတာဝါ အဆောက်အဦတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဈေးနှုန်းများအား ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကြိုတင်ရက်ချိန်း ရယူပါ။ ဖုန်း 02-011-5888 , အီးမေး [email protected],
ကျေးဇူးပြု၍ သွေးစစ်ရန် သွေးမဖောက်မီ အနည်းဆုံး ၁၂ နာရီ အစားအသောက် စားသောက်ခြင်း မပြုရ။
သင့်တွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆေးကုသမှုပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးမှီဝဲနေခြင်းများ ရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ သူနာပြုအား ကြိုတင်အကြောင်းကြားပါ။